Wasiirka waxbarashada ayaa Kormeer ku tagay Akadamiyada cilmiga fanka iyo Suugaanta – Wasaarada Waxbarashada , Hiddaha & Tacliinta Sare
Wasiirka waxbarashada ayaa Kormeer ku tagay Akadamiyada cilmiga fanka iyo Suugaanta
Wasiirka Wasaaradda waxbarashada Hiddaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Mudane Cabdulaahi Goodax Bare ayaa maanta kormeer ku tagay Akadamiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ee magaalada Muqdisho.
Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa kormeeray qeybaha ay ka kooban tahay Akadamiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta.
Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa kormeerka ku wehelinayay ,gudoomiyaha Akadamiyada cilmiga fanka iyo suugaanta Cabduqaadir Nuur Xuseen (Maax).
Kulan wasiirka waxbarashada iyo guddoomiyaha akadamiyadda ku dhaxmaray xaruntan ayaa looga hadlay, horumarinta akadamiyada iyo sidii dib u dayactir loogu sameyn lahaa.
Sidoo kale kulanka ayaa looga hadlay sidii dib loogu soo celin lahaa dhismayaal ka mid ah Akadamiyada oo ay dagan yihiin dad shacab ah.
Wasiirka wasaaradda waxbarshada hiddaha iyo tacliinta sare Mudane Cabdulaahi Goodax Bare ayaa sheegay inay muhiim tahay horumarinta Akadamiyada cilmiga fanka iyo suugaanta islamarkaana qorshaha ay ugu jirto in dib u dayactir lagu sameyo dhismayaasha bur bursan.
“Waxaan qorsheyneynaa sidii loo horumarin lahaa Akadamiyadda cilmiga fanka iyo suugaanta maadaam ay tahay meel lagu sax afka hoyo iyo qorista afka soomaaliya waxa ay u baahantahay shaqooyin badan oo ay kamid tahay in dib loosoo celiyo dhismayaasha ka maqan iyo in dayactir lagu sameyo, ka wasaarad ahaan dadaal ayaan ugu jirnaa arintaasi”ayuu yiri wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulahi Goodax Barre.
Wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulahi Goodax Barre ayaa dadaal ugu jira sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dalka, islamarkana dib u dhis loogu sameyn lahaa iskuullada iyo goobaha kale ee muhiim ah u ah waxbarashada.